LRDP: February 2013
ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းအား အလုပ်သမား ရေးဆောင်ရွက်သူများကွန်ယက် မှ ဂုဏ်ပြုလက်မှတ် ပေးအပ်
အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် စိတ်အားငွေအားအကြံဥာဏ် အားဖြင့် ၀ိုင်းဝန်း ကူညီ ရပ်တည်
ပေးခဲ့သော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မိသားစု ဆရာဝန် ဖြစ်သော ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းအား အလုပ်သမား ရေးဆောင်ရွက်သူများကွန်ယက် မှ ဂုဏ်ပြုလက်မှတ် ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ အဖွဲ့ ချုပ် အဖွဲ့ ဝင်များအပါအ၀င် လူထု အကျိုးသယ်ပိုးနေသော သူများအား အခမဲ့ ဆေးကုသပေးနေသည့် ဆရာကြီး ၏ ဘားလမ်းဆေးခန်းတွင် ဂုဏ်ပြုလက်မှတ်အားပေးအပ်ခဲ့ခြင်း ကို မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။
Actionaid က ဥက္ကဌ မြန်မာပြည်ေ၇ာက်လာတဲ့ အတွက် ကျမ တို့ LRDPနှင့် တွ့ ဆုံ
ဒီကနေ့Actionaid က ဥက္ကဌ မြန်မာပြည်ေ၇ာက်လာတဲ့ အတွက် ကျမ ကိုတွေ့ ဆုံဖို့ ဖိတ်ကြားတဲ့ အတွက် ကျမနဲ့အတူ ဖိနပ်စက်ရုံများ သမဂ မြို့ နယ်အဆင့် အီးစီ အဖွဲ့ ဝင် အမျိုးသမီး လေးရယ် အထည်ချုပ် သမဂရဲ့ အဖွဲ့ ဝင် ညီမငယ်လေး ရယ် ကန်တော်ကြီးဟော်တယ်မှာ သွားရောက်တွေ့ ဆုံ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။ သူတို့ ကတော့ အမျိုးသမီး အခွင့်အရေး ဦးစားပေးမို့မြန်မာအလုပ်သမားအမျိုးသမီးလေးတွေ ဘ၀ တင်ပြဖြစ်ကြပါတယ်
Posted by LRDP at 6:45 AM No comments:
ဦးသူရိန်အောင်မှ ဂုဏ်ပြုလက်မှတ် ကို ဦးကျော်သူအားပေးအပ်ခဲ့ရာ
ကျမတို့ အလုပ်သမားရေးဆောင်ရွက်သူများကွန်ယက် မှ ဦးစီးကျင်းပပေးသော အလုပ်အမားများအတွက် အလုပ်၇ုံဆွေးနွေးပွဲ ၂ရက်တာ တွင် စားစရိတ် အားလုံး တည်းခို စရိတ်အားလုံး ကူညီပေးခဲ့သော နာရေးကူညီမှုအသင်းအားလေးစားဂုဏ်ပြုသောအား ဖြင့် ကွန်ယက်အဖွဲ့ ဝင် ဦးသူရိန်အောင်မှ ဂုဏ်ပြုလက်မှတ် ကို ဦးကျော်သူအားပေးအပ်ခဲ့ရာ ဦးကျော်သူမှ လက်ခံ ရယူသောပုံဖြစ်ပါသည် ။ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြည်နူးနိုင်ကြပါစေ
Posted by LRDP at 6:42 AM No comments:
အလုပ်သမားအရေးဆောင်ရွက်သူများ၊ အလုပ်သမားသမဂ္ဂများနှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ ဆွေးနွေးပွဲ Peace Center တွင်ကျင်းပ၊
Union Ministers U Soe Thein, U Aung Min and former police major general U Khin Yee met us.
Labour Rights Activists and basic labour unions on 23rd, 02, 2013. The chief director of labour
department, U Win Shein also attended. I have talked as LRDP representative that even the
government officials are not disturb and do cooperate, the business owners are still violating
the labour rights and law. We have reported to the government officials to check and negotiate
the case of firing the workers. The labour leaders also reported their rights violation cases and
situations. All the union members react and talked to each of us with serious and they said they
will find out the way to negotiate.
LRDP ၏ တာဝန်ရှိသူ မှ ၀န်ကြီးများနှင့် တွေ့ ဆုံမှုတွင် အကြံပြုတင်ပြ ချက် မှာ အလုပ်သမားအဖွဲ့ ဖွဲ့ စည်းခွင့် ရပြီး နောက် အလုပ်သမားအဖွဲ့ များဖွဲ့ နိုင်ရန် မိမိတို့ မှ အလုပ်သမားထုထဲ တွင်အခွင့်အလမ်းများ လက်ဆင့်ကမ်းခြင်း ပို့ ချပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း ဖွဲ့ စည်းပြီး သမဂ္ဂများကို အလုပ်ရှင်မှ အလုပ်ထုတ်ပစ်ခြင်း နေရာပြောင်းရွေ့ ခြင်းတို့ ကြောင့် ဖွဲ့ စည်းခွင့်ရသည်ကို လက်ဆင့်ကမ်းခဲ့သော မိမိ တို့ ပင် တရားခံ ဖြစ်ပြီလားဟု တွေးတောမိပါသည်။ သို့ အတွက် ၀န်ကြီးများအနေနှင့် အလုပ်ရှင်များကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲ လာနိုင်ရန် တိုက်တွန်း နိုးဆော်ရန် အကြံပေးတင်ပြခဲ့သည်။
Posted by LRDP at 2:17 AM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံ အလုပ်သမားရေးရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ဖိတ်ကြားလွှာ၊
Posted by LRDP at 12:16 AM No comments:
Discussed and explained for the basic labour organization (ShweKu) with the labour reqistration officer from Mague division.
Posted by LRDP at 9:19 AM No comments:
Disscussed and explained about labours right at the Basic labour organization (ShweKu)
Mague division .
Posted by LRDP at 9:14 AM No comments:
the Basic labour organization (ShweKu) Mague division .
the Basic labour organization (ShweKu)
Posted by LRDP at 9:10 AM No comments:
Posted by LRDP at 11:24 AM No comments:
Posted by LRDP at 11:21 AM No comments:
LRDP ၏ သတင်းပြန်ကြားရေးနှင့် Webside တာဝန်ခံ ဦးယဉ်ထွေး နှင့် စိုက်ပျိုးရေးအလုပ်သမားများ
Posted by LRDP at 11:18 AM No comments:
Posted by LRDP at 11:13 AM 1 comment:
ပို့ ကုန်သွင်းကုန်စစ်ဆေးရေး အလုပ်သမားများ နှင့် ဖွဲ့ စည်းရေးဆွေးနွေးပွဲ
Posted by LRDP at 11:10 AM No comments:
LRDP ဥက္ကဌ ဆရာဇော်မြင့်အောင် နှင့် ကျမ တို့လွတ်လပ်သော အလုပ်သမားသမဂ`ဂ ဖြစ်မြောက်ရေး လှုတ်ရှားစဉ်
ပထမဆုံး ဖွဲ့ စည်းပေးခဲ့သည့် ရွှေပြည်သာ အထည်ချုပ် အခြေခံ အလုပ်သမား များနှင့် အတူ
Posted by LRDP at 11:03 AM No comments:
ကျမ အိရွှေစင်ညွန့် သည် ပြည်ပတွင် အလုပ်သမား အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများ အိုင်အယ်အို နှင့် မြန်မာ သဘောတူ စာချုပ်များ အလုပ်သမားအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းများကို ၆နှစ်ကြာ လေ့လာ ဆည်းပူး သင်ယူခြင်းသင်ကြားပေးခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၂ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၈ တွင် အမိ မြန်မာပြည်သို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီး ကျောင်းသားနိုင်ငံရေး ပါတီနိုင်ငံ ရေး လုပ်ခဲ့သည့် ကာလ တစ်လျောက် အခြေခံပြည်သူလူထု လက်ထဲသို့ကျမအနေနှင့် မည်သည့် အရာမှ လက်ဆင့်ကမ်းမပေးနိုင် သေးဟု သုံးသပ် ၍ အလုပ်သမားထုအား၎င်းတို့ အခွင့်အရေးသိရှိနားလည်နိုင်စေရန် နည်းလမ်းများ လက်ဆင့်ကမ်းမည် အဖိနှိပ်ခံ အလုပ်သမားထု ဘ၀ ဖက်မှရပ်တည်မည်ဟူသောယုံကြည်ချက် ဖြင့် မြန်မာပြည်သို့ ပြန်ရောက်ပြီး ရရက် အကြာတွင်ဤပုံပါလွတ်လပ်သောအလုပ်သမားသမဂ`ဂများဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီကို စုပေါင်းဦးဆောင်မှုဖြင့် ဖွဲ့ စည်းနိုင်ခဲ့သည်။
Posted by LRDP at 10:49 AM No comments: